Ogaden News Agency (ONA) – Barnaamijkii Aragtida Halgamaaga – Waajibaadka midwalba 3xda Jiil ee ku Kulantay Halganka Gobanimadoon
Barnaamijkii Aragtida Halgamaaga – Waajibaadka midwalba 3xda Jiil ee ku Kulantay Halganka Gobanimadoon
Posted by ONA Admin	/ April 16, 2014
Waxaan Hordhicii barnaamijka kaga hadlaynay facaada (Generation) isku soo gaadhay halganka ay JWXO hogaaminayso siday u wadashaqayn lahaayeen iyadoo midwalba uu garanayo masuuliyadda saaran iyo waxay umadiisa ka sugayso. Mawduucan oo aad u qota-dheer sidaan soo sheegnayna aanan waxyaaba badan kaga hadli doonin halkan oon u daynay doodaha gaarka ah ee xubnaha iyo Siminaarada, waxaan hoosta ka xariiqnay inay tahay taariikh lagu faani karo oon horey usoo marin sooyaalka taariikhaha Somali jinsiga loo yaqaano in halgan siyaasi oo socda ama Xisbi la aasaasay, inay ku kulmaan wiil iyo awoowgii isagoon hagaasin. Sidaa daraadeed waa taariikh mudan inay JWXO ku faanto.
Somaliya Xisbiyo badan oo mucaarad ah oo dhamaantood ka haystay taageero shacabkooda iyo waliba dawaladaha qaarkood sida Taliyaaniga, Ingriiska, Sacuudiga, Liibiya, iyo Itobiya oo doonaysay inay kula dagaalanto xukuumadii Somaliyeed iyo halgankii gobanimadoon ee WSLF ayaa ka asaasmay Sideetameeyadii (80s), dhamaantood waa hore ayay saaxada ka baxeen, meesha ururka ONLF oo dagaal dhanwalba ah lagu qaaday uu yahay xoog ka jira Geeska Afrika iyo Caalamkaba.
Si wada-shaqaynta iyo wada-tashiga ka dhexeeya facaadaa halganka isku soo gaadhay uu u taabagalo waa inuu midba midka kale fahmaa dareenkiisa iyo wuxuu tabanayo. Hadii kale waxaa imanaysa is-fahamdarro iyo in la’isku qabsado ooda aan qaadno iyo aan jiidno.
Waxaa loo baahan yahay inay na kulmiso Xamaasadda Dhalinyarada iyo Xikamadda Odayaasha, waxaana hubaal ah hadaan odhaahdaa si fiican u fahmo inay wada-shaqaynta iyo is-fahamka facaadda wada nool ee hawsha ay ka dhaxeyso ay fududaanayso. Waana arimaha aan ku lafaguri doono barnaamijkeena Caawan iyo kuwa ku xigaba. Daawasho Wacan.
Wixii Tala ah ama Su’aalo ah noogu soo hagaaji cinwaankii hore.